पूर्व प्रेमी/प्रेमिकाका लागि रुँदा तौल घट्छ - Dhangadhi Khabar
आइतबार १८, जेठ २०७७ ०४:३६
पूर्व प्रेमी/प्रेमिकाका लागि रुँदा तौल घट्छ
एक व्यक्तिले आफ्नो जीवनकालमा १६.५ ग्यालोन आँसु झार्ने अनुसन्धानकर्ता बताउँछन् । तर कहिलेकाँही मानिसहरु आफ्नो भावनालाई दबाउन खोज्छन्, यसलाई उजागर गर्न लजाउँछन् पनि । तर यदि भावनात्मक रुवाईले तपाईंलाई तौल घटाउन सहयोग गर्छ भन्दा कस्तो लाग्ला ? यो सुन्ने बित्तिकै कतिलाई लाग्न सक्छ कि आफूले थुप्रै वर्षदेखि दबाएर राखेको आँसुको ग्यालोन खन्याउने बेला आएको छ ।
तपाईंमध्ये धेरैले आफ्नो भावना व्यक्त गर्दा तौल घट्छ भन्दा पत्याउनु हुन्न होला । हामीमध्ये धेरै यो अवस्थाबाट गुज्रिएका छौं । कसैले मन तोडेका बेला तपाईंलाई तनाव हुन्छ, धेरै खानुहुन्छ र त्यसको केही दिनपछि आफूलाई मनपर्ने जिन्स लगाउनै नमिल्ने गरी टाइट भएको पाउनुहुन्छ । यस्तो अवस्थामा पनि तौल बढेको देख्दा तपाईंलाई विश्वास पनि नलाग्न सक्छ ।
हामी तनावमा हुँदा कार्टिसोल हर्मोनको श्राव हुन्छ जुन मोटोपनासँग सम्बन्धित हुन्छ ।
हामीमध्ये धेरैलाई थाहा छ कि यो हर्मोनले तनावसँग जुध्न सहयोग गर्छ । यहाँ समस्या के छ भने आजकाल मानिसहरु जीवनयापनका लागि शारिरिक क्रियाकलाप गर्दैनन् । मानिसहरु तनावमा हुँदा र रिस उठेका बेला बसिराख्न रुचाउँछन् त्यसकारण हाम्रो शरीरले तनाव कम गर्ने केही क्यालोरीको उपयोग गरिसकेको ठान्छ । यद्यपी, त्यसको प्रयोग नभएको पनि हुनसक्छ ।
यसैबीच, वैज्ञानिकले भावुक भएपछि आउने आँसुमा कार्टिसोल बढाउने हार्मोन भएको पत्ता लगाएका छन् । यसलाई प्रोल्याक्टिन, लिउ–इन्केफालिन र एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिन (एसिटीएच) भनिन्छ । हामी अत्यधिक दबाबमा हुँदा यी हर्मोन निष्कासन हुन्छ ।
त्यसकारण जब हामीले आफ्ना भावनालाई नदबाइकनै, मन खोलेर रुन्छौं तब यी हर्मोन बाहिर निस्कन्छन् जसका कारण कार्टिसोलको स्तर घट्ने गर्छ ।
कार्टिसोल हर्मोनलाई कसरी कम गर्ने तरिका थाहा नहुँदा समस्या निम्तिने हो । त्यसकारण तनावमा भएका बेला हामीलाई अत्यधिक भोक लाग्छ जसका कारण तौल बढ्ने गर्छ । यसका लागि विज्ञानलाई धन्यवाद भन्नै पर्छ जसले समस्यामा पर्दा पनि तौल घटाउने उपाय पत्ता लगाएको छ । स्ट्रेस हर्मोन शरीर भित्र छ कि बाहिर, त्यो कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ ।
यदि तपाईं राम्रो अभिनय गर्न सक्नुहुन्छ र प्याज काटेर रुने सोच बनाइराख्नुभएको छ भने ढुक्क हुनुहोस् यसले तपाईंलाई सहयोग गर्दैन । वास्तविक भावनामा बगेर रुँदा मात्र आवश्यक हर्मोनको श्राव हुन्छ ।
वैज्ञानिकका अनुसार भावनामा बगेर रुने सबैभन्दा राम्रो समय भनेको बेलुका सात देखि १० बजेसम्म हो । यतिबेला मानिसहरु आफूलाई मनपर्ने मानिसको साथमा हुन्छन् ।
त्यसकारण यदि तपाईंको सम्बन्ध टुटेको छ र जीवनको निकै कठिन अवस्थामा हुनुहुन्छ भने त्यसलाई बाहिर निस्कन दिनुहोस् । मन खोलेर रुनु दिमागलाई शान्त बनाउने एक माध्यम पनि हो ।
आइतबार १५, बैशाख २०७६ ०२:३५ मा प्रकाशित
कोरोना भाइरस भगाउनका लागि पुजारीले दिए मानव बली
कुकुरको बच्चा किनेर घर ल्याएको २ वर्षपछि भालु बनेपछि...
यस्तो ठाँउ जहाँ उल्टो दिशामा चल्छन् गाडी र घडि !
जहाँ जागिर खानका लागि मालिकसँग ‘डेटिङ’ जानुपर्छ...
मानिसहरु महिनौ सुतिरहने गाउँ
कोरोना संक्रमित युवकले ‘भेन्टिलेटर’बाट उठे लगत्तै गर्लफ्रेन्डलाई ‘प्रपोज’ गरेपछि...